Diyaaradda Air Niugini ayaa burburtay B737 xilli ay saarnaayeen lagoon
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Diyaaradda Air Niugini ayaa burburtay B737 xilli ay saarnaayeen lagoon
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Micronesia • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Wadanka Federated States of Micronesia, diyaarad Air Niugini B737 ah ayaa ku degtay lagoon ayada oo isku dayaysa inay ka degto garoonka diyaaradaha ee Chuuk Island.
Dhammaan 47 rakaab ah iyo shaqaalihii diyaaradda ayaa ka badbaaday shilka subaxnimadii Jimcaha
Isku xigxiga dhacdooyinka wali ma cadda. Diyaaradda ayaa sheegtay in diyaaradda ay ku degtay meel ka yar dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan. Si kastaba ha noqotee, Jaynes wuxuu sheegay in xaalada kaliya ee uu qiyaasi karaa ay tahay inay ku dhacday dhamaadka wadada ay ku sii socoto biyaha.
Ciidamada Badda ee Mareykanka ayaa sheegay in badmaaxiinta ka shaqeeya agagaarka hagaajinta whar ay sidoo kale gacan ka geysteen badbaadinta iyaga oo adeegsanaya doon buufin ah si ay dadka uga soo dajiso xeebta ka hor inta aysan diyaaraddu ku dagin qiyaastii 30 mitir (100 fiit) oo biyo ah.
Air Niugini Limited waa diyaaradda qaranka ee Papua New Guinea, oo fadhigeedu yahay Air Niugini House oo ku taal dhismaha garoonka diyaaradaha caalamiga ee Jacksons, Port Moresby. Waxay ka shaqeysaa shabakad gudaha ah oo ka timaadda Port Moresby iyo Lae, iyo sidoo kale adeegyada caalamiga ah ee Aasiya, Oceania, iyo Australia.
Gobolka Chuuk (oo sidoo kale loo yaqaan Truk) wuxuu ka mid yahay afarta gobol ee Federaal ka ah Micronesia ee Badweynta Baasifigga. Chuuk waa gobolka ugu dadka badan ee FSM oo ay ku nool yihiin 50,000 oo qof oo ku fadhiya 120 kiiloomitir isku wareeg ah (46 mayl laba jibaaran). Chuuk Lagoon waa halka ay dadka badankoodu ku nool yihiin. Xarunta ugu weyn ee dadka ku nool gobolka Chuuk waa Chuuk Lagoon, oo ah jasiirado waaweyn oo leh jasiirado buuro leh oo ay ku wareegsan yihiin jasiirado isdaba joog ah oo ku yaal xayndaabka xayndaabka.
Dawladaha Federaaliga ah ee Micronesia waa waddan ku baahsan galbeedka Badweynta Baasifigga kana kooban in ka badan 600 oo jasiiradood. Micronesia waxay ka kooban tahay 4 dowladood oo jasiirad ah: Pohnpei, Kosrae, Chuuk iyo Yap. Dalku wuxuu caan ku yahay xeebaha timirta-hooska leh, quusitaanka burburka iyo burburka qadiimiga ah, oo ay kujiraan Nan Madol, macbudyo basaltim ah iyo godad aas ah oo ka baxa lagana helo Pohnpei.
isagu FSM wuxuu hore uga mid ahaa qayb ka mid ah Gobollada Ammaan ee Jasiiradaha Baasifigga (TTPI), a UnQowmiyadaha ited Territory Territory oo hoos timaada maamulka Mareykanka, laakiin waxay sameysatay dowlad dastuuri ah May 10, 1979, oo noqotay dowlad madaxbanaan kadib markii xornimada la qaatay Nofeembar 3, 1986 iyada oo la adeegsanayo Isbahaysiga Xorta ee Isbahaysiga ee United States